5 Element of Viral Content | Martech Zone
Ndị ọma nọ na Onye nyocha ihe ọhaneze ezipụla ozi infographic, 5 Key Elements nke Viral Content, site na Intersection Consulting.
Onwe ya, achọghị m mkpụrụ okwu viral maka infographic a… Okwu a masịrị m nkekọrịta. Ọtụtụ oge ị nwere ike karịa atụmanya na isi ihe ọ bụla n'ime ihe ọmụma a - mana ọ pụtaghị na ọ na-amalite ịrịa.
Leo Widrich n'elu Buffer Blog dere a nnukwu post banyere ihe na-eme ka ọdịnaya gbasaa. N'ime ya, ọ na-enyocha ụfọdụ ihe ndị nyeere otu akwụkwọ ozi aka karịrị ọkara nde mmasị. O kwukwara ihe akwụkwọ nyocha na-adọrọ mmasị gbasara ihe na-eme ka ọdịnaya dị n'ịntanetị ghari ịba.
Tags: shareshare bọtịnụkọwaa iheshareable ọdịnaya-ekere òkèmalitere ịrịamalitere ịrịa ahịausoro nje
Ide ederede adighi ara, o choro omume
Ngwa ngwa: Mgbanwe Mgbanwe Obere maka $ 15